4 Okwu Samuel wee na-eru Izrel dum ntị.
Izrel wee gaa ibuso ndị Filistia agha; ha wee maa ụlọikwuu ha n’akụkụ Ebeniza,+ ndị Filistia makwara ụlọikwuu ha n’Efek.+
2 Ndị Filistia wee hazie onwe ha n’usoro+ ibuso Izrel agha, agha ahụ wee dịrị Izrel njọ, ndị Filistia wee merie ha,+ gbuo ihe dị ka puku ndị ikom anọ n’ọgbọ agha, n’ọhịa.
3 Mgbe ndị Izrel bịarutere n’ebe ha mara ụlọikwuu, ndị okenye Izrel malitere ịsị: “Gịnị mere Jehova ji merie anyị taa n’ihu ndị Filistia?+ Ka anyị gaa Shaịlo buru igbe ọgbụgba ndụ Jehova,+ ka ọ bata n’etiti anyị ma zọpụta anyị n’ọbụ aka ndị iro anyị.”
4 Ha wee ziga ndị mmadụ na Shaịlo, ha wee si n’ebe ahụ bute igbe ọgbụgba ndụ Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ onye nọ ọdụ n’elu cherọb.+ Ụmụ abụọ Ilaị bụ́ Họfnaị na Finihas nọkwa n’ebe ahụ igbe ọgbụgba ndụ nke ezi Chineke dị.+
5 O wee ruo na ngwa ngwa e bubatara igbe ọgbụgba ndụ Jehova n’ebe ha mara ụlọikwuu, ndị Izrel niile malitere iti mkpu n’oké olu,+ nke mere na ebe niile gbara aghara.
6 Ndị Filistia nụkwara mkpu ahụ a na-eti wee malite ịsị: “Gịnị ka oké mkpu a na-eti+ n’ebe ndị Hibru mara ụlọikwuu pụtara?” N’ikpeazụ, ha chọpụtara na e bubatawo igbe Jehova n’ebe ha mara ụlọikwuu.
7 Egwu wee jide ndị Filistia, n’ihi na, ha sịrị: “Chineke abatawo n’ebe ha mara ụlọikwuu!”+ Ha wee sị: “Anyị efuola, n’ihi na ihe dị otú a emetụbeghị!
8 Anyị efuola! Ònye ga-azọpụta anyị n’aka Chineke a dị ebube? Nke a bụ Chineke ahụ ji ụdị ihe otiti ọ bụla gbuo Ijipt n’ala ịkpa.+
9 Nweenụ obi ike, meekwanụ ka ndị dimkpa, unu ndị Filistia, ka unu wee ghara ijere ndị Hibru ozi dị nnọọ ka ha jeere unu ozi;+ meenụ ka ndị dimkpa, buokwanụ agha!”
10 Ndị Filistia wee buo agha, e wee merie Izrel,+ onye ọ bụla n’ime ha wee gbaa ọsọ gbaga n’ụlọikwuu ya;+ ndị e gburu wee dị nnọọ ukwuu,+ nke mere na n’etiti ndị Izrel, puku ndị ikom iri atọ ndị ji ụkwụ aga nwụrụ.+
11 E bukwaara igbe Chineke,+ ụmụ abụọ Ilaị, bụ́ Họfnaị na Finihas, nwụkwara.+
12 Otu nwoke bụ́ onye ebo Benjamin, nke yi uwe mwụda dọwara adọwa,+ onye kpokwasịkwara ájá n’isi ya,+ ji ọsọ gbapụta n’ọgbọ agha wee gbarute Shaịlo n’ụbọchị ahụ.
13 Mgbe ọ gbarutere, Ilaị nọ ọdụ n’oche dị n’akụkụ ụzọ, na-ele anya, n’ihi na obi na-ama ya jijiji maka igbe nke ezi Chineke.+ Nwoke ahụ wee banye n’obodo ka ọ kọọ ihe merenụ, obodo ahụ dum wee malite ịkwa ákwá.
14 Ilaị wee nụ mkpu ákwá ahụ. O wee sị: “Gịnị ka ọgba aghara a m na-anụ ụda ya pụtara?”+ Nwoke ahụ wee mee ngwa ka ọ banye kọọrọ Ilaị.
15 (Ilaị gbara afọ iri itoolu na asatọ, anya ya anaghịkwa emegharị emegharị nke mere na o nweghị ike ịhụ ụzọ.)+
16 Nwoke ahụ wee sị Ilaị: “Ọ bụ m bụ onye si n’ọgbọ agha, m si n’ọgbọ agha gbalata taa.” O wee sị: “Nwa m, gịnị mere?”
17 Onye ahụ nke bịara izi ozi wee zaa, sị: “Izrel esiwo n’ihu ndị Filistia gbaa ọsọ, e meriwokwa ndị Izrel nke ukwuu;+ ụmụ gị abụọ—Họfnaị na Finihas+—anwụwokwa, e buruwokwa igbe nke ezi Chineke.”+
18 O wee ruo na ozugbo ọ kpọtara igbe nke ezi Chineke aha, ọ malitere ịda n’oche ya wee dalaa azụ n’akụkụ ọnụ ụzọ ámá, olu ya wee gbajie, o wee nwụọ, n’ihi na nwoke ahụ emewo agadi, o bukwara ibu; ya onwe ya kpere Izrel ikpe afọ iri anọ.
19 Nwunye nwa ya, bụ́ nwunye Finihas, dị ime ọmụmụ, o wee nụ akụkọ ahụ bụ́ na e buuru igbe ezi Chineke nakwa na nna di ya na di ya anwụọla. O wee tukwuru malite ịmụ nwa, n’ihi na ime malitere ime ya na mberede.+
20 Mgbe ọ na-aga ịnwụ, ụmụ nwaanyị ndị guzo ya n’akụkụ malitere ịsị ya: “Atụla egwu, n’ihi na ọ bụ nwa nwoke ka ị mụrụ.”+ Ọ tụpụghị ọnụ, o tinyeghịkwa obi ya n’okwu ahụ.
21 Ma ọ gụrụ nwa ahụ Ịkabọd,+ sị: “Ebube esiwo n’Izrel pụọ gaa ná mba ọzọ,”+ ọ bụ n’ihi igbe nke ezi Chineke ahụ e buuru nakwa n’ihi nna di ya na di ya.+
22 O wee sị: “Ebube esiwo n’Izrel pụọ gaa ná mba ọzọ,+ n’ihi na e buruwo igbe nke ezi Chineke.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D9%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl